Mba hamelona sy hampandroso… | NewsMada
Mba hamelona sy hampandroso…
Par Taratra sur 08/10/2019
Iza ihany no mbola milaza na hilaza fa tsy ilaina ny “facebook” ? Apetraka ihany izany fanontaniana izany, manoloana ny resabe sy ny adihevitra mila tsy hisy fiafarany amin’ny fampiasana ity teknolojia vaovaon’ny fifandraisana, na antsoina mahazatra koa amin’ny hoe “tambajotram-pifandraisana sosialy” itony. Ny fampiasana azy no mahatsara na maharatsy azy. “Toa ny antsy io e”, hoy ny mpandinika iray izay. Inona no tsy vitan’ny fampiasana ny antsy ? Fitaovana tena ilaina ao an-tokantrano ny antsy. Alaivo sary an-tsaina anie izany hoe lakozia tsy misy antsy izany. Inona no sakafo ho vita raha tsy misy ity fitaovana fandidiana ity ? Manampy sy mahasoa izany ny antsy. Fa mifanohitra amin’izay, azo andratrana,…, eny, hamonoana, handatsahana aina mihitsy koa ny antsy rehefa ampiasaina amin’ny zava-dratsy.
Dia toa izany koa ity “facebook facebook” ity. Rehefa ampiasaina am-piheverana, am-pahendrena… mahasoa sy mamelona. Mitondra fampampandrosoana amin’ny lafiny maro. He izao ny nanjo ilay saofera sy receveur-na taxi-be iray, nahay vava sy nanimbazimba, nanao tsinontsinona ny mpandeha tao anatiny. Nahoraka dia nahoraka ny vaovao rehefa navoakan’ny olona tao anaty “facebook”. Ny niafarany, naaton’ny kaoperativa tamin’ny asany izy roa lahy.
Toa izany koa ireny manampahefana, mpitandro filaminana,tompon’andraikitra ambony… mpanampatra fahefana sy mpanao kely tsy mba mamindro, mpanao kolikoly…ireny, avoakan’ny olona ao anaty “facebook” ireny. Firifiry no efa voasazy, na nandraisana fepetra mihitsy rehefa voamarina fa tena ratsy tokoa ny nataony.
Ny mahavariana, misy amin’ny tompon’andraikitra ambony no be tsikera, manome tsiny be fahatany amin’ny fampiasan’ny olona ity “facebook” ity. Izy tenany anefa amin’io mampiasa “facebook”, ary tena be menomenona sy tsikera mihitsy koa. Tsy mahazaka ? Tsy mahatanty tsikera ? Fa rehefa iza no manao dia mety, ary rehefa iza no manao dia lazaina fa tsy mety ?
Anjaran’ny tsirairay ny mieritreritra, mandanjalanja ny fampiasana itony fitaovana itony. Ampiasaina mba hamelona sy hampandroso, fa tsy hamono sy hampihemotra. Izay no ilana ny fametrahana lalàna… ho arofanina.